Archive du 20170218
Ravalo sy Rajoelina Hopotehin�ny HVM ?
Tsy nitohy intsony ny resaka momba ny fampihavanam-pirenena, izay mbola misy endrika fanilihana ny hafa sy fanomezana tombondahiny ny mpitondra am-perinasa,
Toavina Ralambomahay �Miandry izay higadonany sisa isika�
Samy manao izay tiany atao avokoa ny vazaha sy ny mpanao politika rehetra amin�izao fotoana izao, hoy ny mpandinika politika, Toavina Ralambomahay.
Mpandinika ny raharaham-pirenena Miantso fifampidinihana
Azo lazaina ho manao resaky ny moana sy ny marenina ihany amin�izao fotoana izao ny mpitondra sy ny mpanohitra ary samy toy ny manao antso an�efitra ihany.
� L�galiste de Madagascar � Manaja ny fifandimbiasam-pahefana ara-demokratika
Mitana ny foto-kevitra nijoroany sy nahafantarana azy hatramin�izay ny fikambanana � L�galiste de Madagascar � tarihin-dRalainirina Marcel
Lalao Ravalomanana Mamaha olana eny ifotony avy hatrany
Fomba fiasa vaovao napetraky ny tan�nan�Antananarivo Renivohitra nanomboka tamin�ity taona 2017 ity ny fitetezana fokontany ao anatin�ireo boriborintany enina.
Fanamafisana ny fahaiza-manaon�ny ben�ny tan�na Kaominina folo no miatrika fiofanana
Kaominina miisa folo eto amin�ny Faritra Analamanga no miatrika fiofanana etsy Anosy nanomboka omaly hahafahana manatsara sy manamafy ny fahaiza-manaon�ireo Ben�ny tan�na.
Foloalindahy Tratran'ny fisolokiana ihany koa
Fanakorontanana ny saim-bahoaka sy miaramila tsotra izao, raha ny fanambaran�ny avy eo anivon�ny zandarimariam-pirenena,
Marc Ramiarinjatovo �Hetra kelikely no mety.�
Na atao be dia be aza ny karazan-ketra nefa isika tsy zarina mandoa, dia ny eo ihany no ho eo, hoy ny ben�ny tan�nan�ny kaominina Alasora, Marc Ramiarinjatovo.
Morontsiraka atsinanana Misy sambo iray mampiahiahy indray
Tsy mbola misy tokotaniny ny marina mikasika ny raharaha fahatrarana ny sambo �Lumina�, nahatrarana boaderozy miisa 341, tokony ho 60 taonina.
Minisitry ny mponina tany Mananjary Nitsinjo manokana ny vehivavy
Antomotra ny fankalazana ny fetin�ny vehivavy, eo ambany fiahian�ny minisitry ny mponina Onitiana Realy.
Famoaham-baovao momba ny boaderozy Mbola migadra i Clovis Razafimalala
Nahafantarana an'i Clovis Razafimalala, mpitarika fikambanana miaro ny tontolo iainana iray ny fahasahiany nanenjika sy niteny ireo vaovao manodidina ny trafikana Andramena tany Analanjirofo.
Fiatrehana loza voajanahary Nanentana ny mpianatra ny Bngrc sy ny vokovoko mena
Izao vao tena tafiditra tanteraka ao anatin�ny vanim-potoanan�ny fahavaratra isika eto Madagasikara, hoy ny sampana mpamantatra ny toetr�andro etsy Ampandrianomby.
Izao sisa !
Nalaza ny politikan�ny kibo tamin�ny repoblika voalohany ary dia niezaka nianoka izany ny olom-pirenena rehetra.
Maziamazian�ny boaderozy !
Salama tsara ve ry Jean a ! Ahoana indray ity maziamazia momba ilay sera be tratra tany Masoala tadiavina hafenina ity e !
Taksibe mpihodina an-dalana Zotra 172 telo nampidirina �fourri�re�
Nidina nizaha ifotony ny tena fomba fiasan�ireo taksibe laharana 172 miasa ao amin�ny faritra iadidiany omaly Ranirison Hasina, Ben�ny tan�nan�ny kaominina Andoharanofotsy sy ireo mpitandro ny filaminana ao aminy.